Maamulka Lixda gobal ee Koonfur galbeed oo dowladda ku dhaliilay iney shaqsiyaad u xaglinaya. – Goobjoog News
Maamulka Lixda gobal ee Koonfur galbeed oo dowladda ku dhaliilay iney shaqsiyaad u xaglinaya.
Maamulka Koonfur galbeed ee Lixda gobal ayaa Dowlada Federaalka Soomaaliya ku dhaliilay, in ay taageerayso Maamul Goboleed ay ku sheegeen in ay wataan shaqsiyaad gaar ah.
Liibaan Sheikh Shuceyb oo ah afhayeenka Maamulkaasi oo la hadlay Goobjoog FM ayaa sheegay in ay soo dhawaynayaan shaqsi kasta oo ka qayb qaadanaya dhismaha Maamul ay yeeshaan gobollada koonfur galbeed. Wuxuuna sharci darro ku tilmaamay maamulka ay dowladdu taageerto ee saddexda gobol.
Afhayeenkan ayaa intaa ku daray in Maamulkooda uu yahay mid ay u wada dhan yihiin – sida uu warka u dhigay – beelaha wada dega lixda Gobol.
Dowladda federaalka soomaaliya ayaa taageertay garabka saddexda gobo lee maamul u sameynta koonfur galbeed soomaaliya, kadib isbar-bar yaac socday in muddo ah. Balse garabka kale ee lixda gobol ayaa ku gacan seyray hindisaha dowladda kuna tilmaamantay mid dhinac u xaglinaya.
AKHRISO:- Madaxda Maamul Goboleedyada Oo Ka Hadlay Arrimo Ay Kamid Tahay Xiisadda Galmudug
Hhswkb ijkkpu Buy cialis next day delivery prices of cialis
Qamxku olmutc viagra online order buy generic cialis
Gyelqp phucrk buy viagra 50mg cialis coupon cvs
Nxjtuv hlbpdz Viagra in usa online canadian pharmacy
generic viagra au super force viagra buy viagra without rx [...
cheapest cialis on the web cialis 4 less buy cialis on line...